dia notanterahina tany Fianarantsoa ny sabotsy 7 aprily teo ny fikaonan-doha ara-toekarena (Forum economique regional) ho an’ny faritanin’i Fianarantsoa. Nisy lohahevitra 5 no novelabelarina tao anatin'izany izay mahakasika indrindra ny fijerena ireo sakana tsy mampandroso ny Faritany Fianarantsoa ka mahatonga azy ho faralahy amin'ireo faritany 6, teo ihany koa ny fanazavana ny tontolom-pamokarana eny anivon'ireo mpamboly. Izany rehetra izany moa dia nataon'ireo mpikambana ao amin’ny CREM, mpampianatra mpikaroka eny amin’ny oniversiten’Antananarivo sy Fianarantsoa. Nisy ny fandraisan'anjara mavitrika nataon'ireo raiamandreny, ireo manampahaizana avy ao amin’ny faritra, ireo fikambanana tsy miankina, ireo antoko politika rehetra izay misy ao amin’ny faritany Fianarantsoa. Nivoitra tao anatin'ny adihevitra ary fa manana tombony manokana Fianarantsoa, na olona izany na ny toetrandro ahafahana mahazo vokatra tsara na ny harena ambany ny tany. Hisy moa ny famakafakana ny hevitra rehetra ary harafitra ho rakikevitra izany, "Hitanay mpikambana ao amin’ny CREM, izay nanatrika taty fa tena liana ny olona. Tsy toy ny efa nisy hatrizay moa izy ity fa araky ny voalaza dia hamoaka "documents cadres" izahay mpahay toekarena, mpikambana ao amin.ny CREM mba ho fototra iaingan'ireo paikady rehetra entina hampandroso ny faritra rehetra ato Fianarantsoa", hoy Atoa Zavamanitra, mpandrindra ny CREM Faritany Fianarantsoa. Tsiahivina fa teo ambany fiahian'ny FFKM Fianarantsoa, CFM Fianarantsoa ary ny Raiamandreny sy ireo « Cadres intellectuels » tao an-toerana ny hetsika izay natao ity. Marihina fa entina mitety faritany hafa ity fikaonan-doha ity raha araka ny fanazavana azo hatrany.